Fifindràmonina · Avrily, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Fifindràmonina · Avrily, 2017
Tantara mikasika ny Fifindràmonina tamin'ny Avrily, 2017
Eoropa Afovoany & Atsinanana28 Avrily 2017
Kirkizy Kickboxer Milaza Fisianà Fanavakavahana Taorian'ny Nandàvany Imasombahoaka ny Fahareseny Tao Rosia
Azia Afovoany sy Kaokazy26 Avrily 2017
Norahonan'ilay mpitsara ny lalao horoahana tsy ho ao amin'ny firenena i Sharsheyev satria nandà ny hiala teo ambony ringa taorian'ny fahareseny.
Ny Tetikady “Vahiny Fahavalo” Mahazatra an'i Meksika
Amerika Avaratra24 Avrily 2017
" Tonga niaraka tamin'ny daozin'ny tsindrona, niampy volana maromaro tamin'ny fanamafisana ny lahateny fampikoropahana tany Etazonia talohan'ny fifidianana ny tetikady talohan'ny nandefasana izany ho an'izay tokony hiantefany."
Ho Anà Somaliàna Iray Mizaka Zom-pirenena Anglisy, “TebokaTsy Azo Iverenana” Ny Brexit
Eoropa Andrefana23 Avrily 2017
"Tsy ilay Angletera izay nahalehibe ahy ity, ilay niriako fatratra hambara ho misy ahy."
‘Mama Afrika’ ao Meksika Mampiantrano Mpifindramonina Avy Nanao Dia Lavitra
Amerika Latina23 Avrily 2017
Lasa fiatoana mahazatra ireo mpifindramonina reraka avy any Arfika sy Haiti handeha hianavaratra ny trano fandraisambahiny iray tsy misy mari-pamantarana manamorona ny sisintanin'i Meksika sy Guatemala.
Fampivoarana ny Tanàndehibe ao Tsetsenia: Nahoana ny Olona no Mandao ny Vohitr'ireo Razambeny?
Azia Afovoany sy Kaokazy23 Avrily 2017
Lasa tanàna haolo ireo toeram-piompiana sy fambolena any Tsetsenia satria natakalon'ireo mponina tao am-bohitra ny asa an-tselika sy ny tolotolotry ny tanàndehibe ireo asa mafy sy ny fitobahan'ny vokatra eny an-tsaha
LOUDNESS, Kintan'ny Mozika Metaly Japoney Voaroaka Tao Amin'ny Sisintany Amerikana
Azia Atsinanana21 Avrily 2017
"Tafaverina aty Osaka aho rehefa avy nanao sidina nandritra ny 27 ora. Tena kivy be."
Manohitra ny Fitifiran'ny Polisy – sy ny Anganon'ny “Maodely Vitsy An'isa” Ireo FrankôShinoa
Eoropa Andrefana18 Avrily 2017
Taorian'ny fitifiran'ny polisy ka nahafaty an'i Shaoyo, nanao fihetsiketsehana ireo Shinoa tao Paris.
Ady eo amin'i Espaina sy ny Fanjakana Britanika noho i Gibraltar ? Milamìna ry Tiana a!
Eoropa Andrefana13 Avrily 2017
Ny zo tsy azo ivalozana mety ho azon'i Espaina amin'izay fepetra ampiharina amin'i Gibraltar amin'ny Brexit no manome hevitra tia hiady avy amin'ireo anti-eoropeana britanika masiaka indrindra.
Fikambanana Miezaka Mamerina ny Asan'Ireo Mpifindramonina Tany An-Tany Nialàny
Amerika Avaratra12 Avrily 2017
Miezaka hanampy ny olona mpifindramonina hahazo indray ny asany teo aloha ireo Foibe "Tongasoa Indray" na dia eo aza ny sakantsakana isan-karazany... Mba tsy ho very maina ny fahaizana norantoviny tany an-tanindrazany.